Ama-Dry Wipes (i-Canister)
(Sinesitifiketi se-EPA kuphela sefektri yethu, Hhayi semikhiqizo ye-EPA)
Ukuze uqiniseke ukuthi ama-wipe owomile kanye ne-canister yikhwalithi engcono kakhulu
Isikhumba esithambile nesintekenteke sengaphansi sezinsana siyayithokozela ifomula yethu esekwe ku-Aloe Vera
Lokho kuhlanza ngobumnene futhi kugcina isikhumba sezinsana sibushelelezi futhi sithanjisiwe.
Kutholakala ezinhlobonhlobo ezifana namaphakethe wokugcwalisa anephunga elimnandi, amaphakethe wokugcwalisa angenasisekelo namabhubhu angenawo amagagasi.
Izesuli zethu zezingane zilungele zonke izidingo zakho zomsebenzisi wokugcina.
UJuan Juan cosmetic wipes unedumela elihle lokuthi abe yifektri ye-OEM yemikhiqizo edumile emhlabeni embonini yezimonyo. Ukwazi kahle ukuthi ukusula kwezimonyo kuyinto enkulu kubathengi bayo yonke iminyaka nohlobo lwesikhumba. Njengemakethe eyinselele futhi eguqukayo njalo, siyaziqhenya ngokuthi sithuthukise ikhwalithi enhle yokusula yezimonyo ngokuya ngamathrendi wabathengi kanye nobuchwepheshe obusha.
Sihlala silwela ukukhushulwa komkhiqizo ukuqinisekisa ukuthi othishanhloko bethu be-oem bagcinwa ngaphambi komdlalo.
Eminyakeni engaphezu kwengu-10, uJuan Juan unguzakwethu we-oem wezinhlobo ezisatshalaliswa emhlabeni zokuhlanza, ukupholisha nokubulala amagciwane ezigidini zamakhaya.
Abaphathi bethu abadumile banethalente futhi banolwazi lomsebenzi wasendlini ngakho izixazululo ezilula zinikezwa abantu abathanda ukuhlanza nokunakekela amakhaya abo. Kanye ukucoceka kokulinganisa masonto onke kuthathelwa indawo ukususwa okusheshayo nokuvame ukwenziwa lapho kusulwa abendlu nsuku zonke. Njengomkhiqizo ohola phambili emakethe, iKhaya lisula ngamakha ahlukahlukene kanye nephunga elilinganiselwe le-edishini ngumqondo omusha nesilinganiso.
I-Microfiber (noma i-microfibre) i-fiber eyenziwe kahle ukwedlula i-denier eyodwa noma i-decitex / intambo, enobubanzi obungaphansi kwama-micrometres ayishumi. Umucu kasilika umayelana nomuntu oyedwa owaphikayo futhi cishe ingxenye yesihlanu yobubanzi bezinwele zomuntu.
IDEAL YOKUZALEKA OKUKHULU, IZINJA EZINININGI, NOMA ISIKHATHI ESINWELELELE NGAPHAKATHI - Amapayipi wokuqeqeshwa kwekhabhoni asetshenzisiwe amakhulu kakhulu ezinhlotsheni ezinkulu noma izinja eziningi, ezihlanganisa indawo enkulu kunamaphakethe we-puppy avamile.
AMATHEBHU AMAKHONA ANAMATHELAYO AVIMBELA UKUSHIPHA- Akunasidingo sokukhathazeka ngalezi zinhlayiya ze-puppy ezishelelayo nezisheleleka phansi; amathebhu ekhoneni lokunamathela agcina la maphedi emidlwane endaweni yawo
Ulwelwesi lweplastiki olungavuzi futhi izingqimba zokukhiya zivikela phansi nekhaphethi.